Yintoni uhlalutyo? Itekhnoloji yeAnalytics eqhuba iZigqibo zeNtengiso
Ngamanye amaxesha kufuneka sibuyele kwizinto ezisisiseko kwaye sicinge ngenene ngezi teknoloji kunye nendlela eziza kusinceda ngayo. Uhlalutyo kwinqanaba elisisiseko lolwazi oluvela kuhlalutyo lwedatha. Sixoxile isigama sokuhlalutya iminyaka ngoku kodwa ngamanye amaxesha kulungile ukubuyela kwiziseko.
Inkcazo yoVavanyo lweNtengiso
Marketing kubahlalutyi Iquka iinkqubo kunye neetekhnoloji ezenza ukuba abathengisi bavavanye impumelelo yamanyathelo abo okuthengisa ngokulinganisa intsebenzo (umz., ukubhloga ngokuchaseneyo nemithombo yeendaba zentlalo kuthelekiswa nonxibelelwano lwejelo) kusetyenziswa iindlela zeshishini ezibalulekileyo, ezinje nge-ROI, ukuthengisa kunye nokusebenza ngokupheleleyo kwentengiso. Ngamanye amagama, iyakuxelela ukuba iinkqubo zakho zentengiso zisebenza kanjani ngokwenene. nge SAS
Yintoni i-Analytics -Vidiyo evela kwi-IBM
Ngokubhekisele kwintengiso ye-Intanethi, I-Web Analytics amaqonga ziinkqubo ezithi ukuqokelela, ukudibanisa kunye nengxelo kwimisebenzi yeendwendwe kwindawo yethu (okanye) yokunxibelelana. Kukho iiseti zangaphantsi ze kubahlalutyi ukuba abathengisi kufuneka bazi kwaye basebenzise amaxesha ngamaxesha:
Uhlalutyo lokuziphatha -Indlela ezenziwa ziindwendwe kunye nendlela abanxibelelana ngayo nephepha ngalinye ziidatha ezibalulekileyo zokuqonda ukuba indawo yakho inokulungiswa njani ukulungiselela ukubandakanyeka kunye nokuguqulwa. Baninzi abantu abayila indawo entle kwaye balibale ukuba eneneni lisango lokwenza ishishini. Kukho itoni yokusebenziseka kwesayensi kunye namava anokusetyenziswa ukonyusa ixabiso lesiza sakho kwishishini lakho.
Ubukrelekrele kwishishini - okanye i-BI kubahlalutyi ukubeka embindini kwayo yonke imiba yokusebenza kwemibutho yakho, ukusuka kwintengiso ukuya kwintsebenzo kunye nogcino-zincwadi, kubunkokeli obuphezulu bokujonga indlela inkampani esebenza ngayo. I-BI isembindini ophakathi, omkhulu kunye namashishini okujonga ukusebenza kunye nokucwangcisa.
Uhlalutyo lokuGuqulwa -Uguquko kwisiza ngumsebenzi wexabiso. Okona kucacileyo kukuthenga kwindawo ye-ecommerce. Nangona kunjalo, ukuba indawo yakho inyusa inkonzo, uguquko lunokuba linani labatyeleli ababhalisela uvavanyo lwasimahla, idemo, ukhuphelo, iwebhsayithi okanye nawuphi na omnye umsebenzi obonisiweyo ukubonelela ngexabiso. Inguquko kubahlalutyi uhlala ubandakanya ukuvavanywa kwezinto ukuze ukwazi ukwandisa indawo ukuze uguqule ngakumbi iindwendwe zibe kubathengi.
Uhlalutyo lobuGcisa loMthengi -Iinkampani ezininzi azijongisisi ukuba abathengi bazo bayazithanda na okanye zeziphi iindlela ezithintela ukubandakanyeka ngokugqibeleleyo. Iinkqubo ezivumela ingxelo yabathengi ngokusebenzisa amajelo asekuhlaleni, uphando kunye nezinye iindawo zokuqokelela idatha zinokubonelela ngophando olungaxabisekanga kwindlela inkampani yakho eqondwa ngayo kunye nento onokuyenza ukuyiphucula.
Uhlalutyo lobomi boMthengi -Ukuqonda amanqanaba omthengi wakho kubalulekile ekwandiseni ukugcinwa kwabathengi, ukuqhuba ixabiso labathengi, kwaye ukujonga kwangaphambili kukhokelela kuthethathethwano olunempumelelo onalo. Ambalwa amaqonga alinganisa amanqanaba kunye nabaxhasi bethu bokuthengisa ngokuzenzekelayo Ekunene kwi-Interactive, qiniseka ukufumana idemo yenkqubo yabo.
Ukuhlaziya imiyalezo - ukuthengisa ngokuzenzekelayo, email, ingxelo yebhokisi engenayo, ISMS, ifowuni kunye nezinye iinkqubo zokuthumela imiyalezo kubahlalutyi kukubonelela ngomsebenzi ngephulo ngalinye, umsebenzi wobhaliso, kwaye uhlala udibana nomnye kubahlalutyi iinkqubo zokunceda ukuphucula umyalezo wakho kunye nokwenziwa kwephulo.
Uhlalutyo lokuQikelela -Kusekwe kwintsebenzo eyadlulayo yesiza sakho, la maqonga ngokwenyani aqikelela ukuba iya kuba yintoni indlela yokuziphatha yexesha elizayo yeendwendwe. Ukuqikelela kubahlalutyi Iqonga lihlala libonelela ngeemodeli apho unokwenza uhlengahlengiso kwaye uqikelele ifuthe lolo tshintsho ekusebenzeni kwendawo yakho. Umzekelo, kuthekani ukuba usika umvuzo wakho ngokucofa isiqingatha kwaye wandise uhlahlo-lwabiwo mali lwakho?
I-Real-time Analytics -Bonelela ngemisebenzi yangoku kunye nokuziphatha kweendwendwe kwindawo yakho ngexesha langoku. Ixesha elilungile kubahlalutyi inokuconjululwa ukuze iguqule indlela yokuziphatha kwabatyeleli, yonyuse amathuba okuguqula, kwaye inike ulwazi malunga nomzuzu ukuya kumzuzu wokuphendula wewebhusayithi yakho.
Uhlalutyo lweNtengiso -Ukuthengiswa kwentengiso licandelo leetekhnoloji elikhulayo. Iideshibhodi zokuthengisa njengabaxhasi bethu e Intengiso ukudibanisa ngokuthe ngqo kwi-CRM yakho ye-Salesforce kunye nokubonelela ngolawulo lokuthengisa ngazo zonke iinkcukacha abazifunayo ukuze babone kwaye baqikelele ukusebenza kwentengiso. Kwaye kumthengisi, ezi nkqubo zibanceda ukuba bandise imveliso, bandise indawo yokuthinta, kwaye bavale imicimbi emikhulu ngokukhawuleza.
Khangela uphando -I-backlinks yimigangatho yegolide ekumgangatho kwi-Intanethi kunye nenqanaba lokuqhuba kwezithuthi kunye nokuguqulwa. Ngenxa yoko, izixhobo ezikunceda ukuba ujonge ifayile yakho ye- amagama aphambili enjini yokukhangela, okhuphisana nabo, kunye nendlela umxholo wakho obekwe ngayo inokukunceda utsale iindwendwe ezintsha kwaye wakhe izicwangciso zomxholo eziqhuba ishishini. Ukukhangela okuhlawulelweyo kubahlalutyi ikunike ukusebenza kwegama elingundoqo kunye neemetriki zokuguqula ukuze ukwazi ukuqhuba iindleko zakho zokhokelo kunye nokwandisa ukuthengisa.
Uhlalutyo lweNtlalo -Njengoko i-Intanethi iphuhlisile, abantu kunye neenkampani bakhile igunya elabagcina bekhula ngokulandelayo. Ezentlalo kubahlalutyi Unokulinganisa elo gunya, ulandele inqanaba lakho ekuhlaleni, akuncede uqonde ukuba kutheni abantu bekulandela kwaye zeziphi izihloko abanxibelelana ngazo kakhulu. Ukukunceda ukuba ukhulele ukulandela intlalontle kunye negunya kuhlala kukhokelela ekuthembekeni phakathi kwabaphulaphuli bakho okanye eluntwini- elinokusetyenziselwa ukungqinisisa ukunyuswa kwakho okanye ukuqhuba uguquko ngqo.
Ewe, zonke ezi nkqubo zinokubonelela ngokugcwala kolwazi kwaye zihlala zikhokelela uhlalutyo ukukhubazeka. Kumnandi ukubona kubahlalutyi amaqonga avula ii-API zawo kwaye adibanise namanye amaqela esithathu ukuphucula ngokuzenzekelayo amava abathengi. Eyona nto ndiyigxekayo kubahlalutyi amaqonga kukuba aqokelela kwaye anike ingxelo ngedatha, kodwa kunqabile ukuba eneneni enze isincomo. Amaqonga ovavanyo lokuguqula enza oku kakuhle-ndinqwenela ukuba ezinye zenze njalo! Njengomzekelo, andiqondi ukuba kutheni kubahlalutyi Iipulatifomu aziboneleli ngengqondo kumacebo omxholo kwaye zikunike iingcebiso malunga nento ekufuneka ubhale ngayo.
tags: uhlalutyo lokuziphathabusiness intelligenceUhlalutyo loguquleloinkcazo yohlalutyoinkcazo ye-analytics yokuthengisangcacisoUhlalutyo lwe-imeyilei-google analyticsUhlalutyo lusebenza njaniIngaba isebenza kanjaniIBMUhlalutyo lokuthengisaUhlalutyo lomyalezoomnitureUhlalutyo oluqikelelweyoUhlalutyo lwexesha lokwenyaniUhlalutyo lwesizauhlalutyo kwezentlalouhlalutyo kwimidiya yoluntuweb analyticsUhlalutyo lwewebhusayithiwndebguyintoni uhlalutyo
Umvavanyi wemeyile: Isixhobo saSimahla sokujonga i-imeyile yakho ye-imeyile ngokuchasene nemicimbi eqhelekileyo ye-SPAM